မကောင်းမှုတွေမှန်သမျှကို ၊ မတွေ့ခင်ကရှောင်ကျဉ်လေ
တွေ့ကြုံလာလျှင်မလွန်ကျူးနဲ့ ၊ အထူးသဖြင့်စောင့်ထိန်းလေ
အရက်သေစာမသောက်စားနဲ့ ၊ မှောက်မှားတတ်တဲ့အရာတွေ
ဓမ္မစကူးမှပြန်လာသော မြေးကလေးက ဘုန်းဘုန်းသင်ပေးလိုက်သော(၃၈)ဖြာမင်္ဂလာ တရားတော်မှ စာပိုဒ်ကလေးတစ်ပိုဒ်ကို အလွတ်ရအောင်ရွတ်ဆိုနေသည်။စာရေးသူက အိမ်ရှေ့ဝရံတာတွင် ကုလားထိုင်တစ်လုံးချလျက် အေးအေးလူလူထိုင်နေရာမှ စိတ်ကမြေးကလေးထံရောက်သွားသည်။ မကောင်းမှု ဆိုတာဝေးဝေးကရှောင်ရမည်။တွေ့အောင်လည်း မရှာရ၊ အကယ်၍ မတော်တဆတွေ့ကြုံလာခဲ့သော် မပြုလုပ်ရ၊ မလွန်ကျူးရ ၊ အထူးသတိထား၍ ထိန်းသိမ်းရမည်။ မကောင်းမှုများစွာတို့ထဲမှ သေးငယ်မလိုနှင့် အကြီးမားဆုံး ဖြစ်သော အရက်သေစာသောက်စားခြင်းသည် အမှားများစွာကို ကျူးလွန်တတ်သောအရာဖြစ်သည်။
မြန်မာရာဇဝင်တွင် ဘုန်းကံကြီးမြင့်တော်မူလှသော တပင်ရွှေထီးသည် အရက်သေစာသောက်စားမူး ယစ်ခြင်းမှ ရှောင်လွှဲခြင်းငှာ မတတ်နိုင်ခဲ့ရှာသောကြောင့်အရွယ်ကောင်းစဉ်မှာပင် ဆိုးရွာစွာနတ်ရွားလားခဲ့ရဖူး သည်။အရက်သေစာသောက်စားခြင်းသည် ဤ၍ဤမျှ ရှောင်နိုင်ရန်ခက်ခဲသည့်အရာတစ်ခုပေလား။ အရက် ကြောင့် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာမှ အလွန်အကျွံအမှုအခင်းဖြစ်သွားကြသူများ ၊ အရက်ကြောင့်သားမယား၊ ဆွေမျိုး မောင်နှမတို့နှင့်ကင်းကွာ၍ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားကြသူများ၊ အရက်ကြောင့်စည်းစိမ်ချမ်းသာပျက်စီးသွားရသူ များ ၊ အရက်သေစာသောက်စား၍ မူးရင်မမောင်းနဲ့မောင်းရင်မမူးနဲ့ ဟူသော လမ်းစည်းကမ်း ယာဉ်စည်းကမ်းတို့ မှသွေဖည်မိ၍ အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်ဆုံးရှုံး သွားကြသူများ ၊ဤသို့သော အကြောင်းအရာများစွာတို့ကို ကြား နေရ ၊ သိနေရ ၊မြင်နေရပါလျက် ဤအရက်ကိုဘာ့ကြောင့်မက်မောစွာ ဖက်တွယ်နေကြပါသနည်း။
သတ္တဝါ အားလုံးတို့အနက် အသိဉာဏ်ပညာအရှိဆုံးသောသူကို လူဟုခေါ်ပါသည်။ အသိဉာဏ်မရှိဆုံး၊ အမိုက်ရိုင်းဆုံးသောသတ္တဝါမှာ ခွေးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း စာရေးသူခွေးမွေးဖူးသည်။ ခွေးသည်သခင်ကို အလွန်သိတတ်သည်။အစာကျွေးသောသူ၏လက်အား ပြန်ကိုက်သောခွေးမရှိ ၊ သူ တစိမ်းတို့အား အလွန်ရန်လို တတ်ငြားလည်း မိမိသခင်ကိုအလွန်ကျိုးနွံတတ်သော သတ္တဝါဖြစ်သည်။အိမ်ကိုစောင့်ရှောက်တတ်သည်။ သခင်ကိုလေးစားတတ်သည်။ တစ်လောက စာရေးသူတို့တစ်ဖက်အိမ်မှ လူငယ်တစ်ဦး ၊အသက်(၃၅)နှစ်ခန့်ရှိ ပြီ ၊ ဒုတိယအရွယ်သို့ ရောက်ပြီဟု ဆိုနိုင်သည်။ ညအချိန်မတော်အရက်မူးလွန်၍ မိခင်နှင့်ရန်ဖြစ်ကြသည် ၊အိပ် နေပြီဖြစ်သော မိခင်ကထမင်းမခူးကျွေးသောကြောင့်ဟူ၏ ။ ဒေါသဖြစ်နေသောမိခင်ကခွေးတောင်မသောက်တဲ့ အရက်ကို နင်ကဘာကောင်မို့သောက်ရသလဲမေးတော့ သားကပြန်ဖြေသည်။
ခွေးမို့လို့မသောက်တာပေါ့တဲ့၊ အမေသောက်နေတဲ့ လက်ဖက်ရည်ကိုသွားပြီးတိုက်ကြည့်ပါလားတဲ့ ၊ဘု ရား ၊ ဘုရား စာရေးသူခေါင်းများပင်ကြီးသွားမိသည်။ အမေဖြစ်သူခမျာ လက်ဖက်ရည်ကိုအလွန်ကြိုက်ပါသည်။ ၎င်း၏မူး၍ပြောသောစကားတွင် အမေသည် ဘာဖြစ်သွားပါသနည်။လူငယ်တွေ ဂါရဝတရားများခေါင်းပါးကုန်ကြ ပြီလား ၊မူး၍ဟူသောအကြောင်းပြချက်ကြောင့် အပါယ်ငရဲမှလွတ်ပါမည်လား။ အမိအဖ ဟူသောအသိတရား များပျောက်ဆုံးကုန်ကြပါလျှင် လောကကြီးဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပါမည်နည်း။ လူငယ်လေးမှာ အရက်ကိုအလွန်အ ကျူးသောက်သုံးရာမှ သားမယားယောက္ခမတို့နှင့် နေထိုင်ရန်လုံးဝ မဖြစ်နိုင်တော့သည့်အခြေအနေတွင် အမေ အိမ်တွင်လာရောက်မှီကပ်နေထိုင်ရသည့်အနေအထားဖြစ်သည်။ မိခင်ကြီးခမျာ ခင်ပွန်းလည်းမရှိရှာတော့၊ ရသမျှနှင့်ရင်မှဖြစ်သောသားကို ကျွေးမွေးထိန်းသိမ်းထားရှာပါသော်လည်းရံဖန်ရံခါသားသည် ကျွေးသောမိခင်၏ လက်ကိုပြန်ကိုက်တတ်သည်ပါတကား။
၂။ အသက်ရှည်ချင် ကျန်းမာချင်ကြသည်။
၃။ ချစ်သူခင်သူ အတူနေချင်သူတို့နှင့် မကွဲမပြားတစ်သားတည်းနေချင်ကြသည်။
၄။ သေဆုံးကွယ်လွန်ပြီး ကောင်းရာသုဂတိရောက်ချင်ကြသည်။
လူတိုင်းဆင်းရဲငတ်မွတ်ကြောင့်ကြစိတ်များဖြင့် မနေလိုကြ၊ မတောင့်မတမကြောင့်မကြနေထိုင်လိုသူ များသာဖြစ်သည်။ အဘက်ဘက်မှ ချမ်းသာပြည့်စုံဖို့ဆိုသည်မှာ ဆန္ဒရှိရုံမျှနှင့်မလုံလောက်ပါ။ ချမ်းသာအောင် ဘယ်လိုနေ၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမည်ဆိုသည်ကို သိဖို့လည်းလိုအပ်သည်။သောက်စားမူးယစ်နေကြသောလူငယ် လေးများအထူးသတိရှိဖို့လိုသည်။ လူ့ဘဝသည် အလွန်တိုတောင်းလှသည်။ ရခဲလှသည့်လူ့ဘဝခဏတာရရှိ လာသည့်အခိုက် အကျိုးရှိသောအသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းဖြင့် လောကအကျိုး၊ သာသနာအကျိုး ၊ မိမိအကျိုး ၊ မိမိ အိမ်ထောင်စုအကျိုး သည်ပိုးခြင်းဖြင့်သာလျှင် မြင့်မြတ်သောဘဝဖြင့် အသက်ရှင်နေထိုင်စေချင်လှသည်။
လူသည်မွေးဖွားသည်မှ သေဆုံးခြင်းမတိုင်မီအထိ သက်ရှည်ကျန်းမာစွာနေထိုင်လိုကြသည်၊ လူကြီး မိဘများကန်တော့ကြသည့်အခါ သက်ရှည်နာကင်းချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပါစေဟုဆုမွန်ကို ခံယူရသည်မှာ ပီတိဖြစ်ဘွယ်အလွန်ကောင်းသည်။ သေရည်သေရက်သည် အသက်ရှည်ခြင်း အနာမဲ့ခြင်းကို အထောက်အကူ ပြုပါရဲ့လား၊ အရက်ကိုစွဲမက်စွာသောက်သုံးနေကြသူအချို့က “မအိုဆေး” ဟုပြောသံကိုကြားဖူးသည်၊ အိုသည် ထိမနေရတော့ မအိုဆေးဟုပြောကြသည်မှာလည်းမမှားပါ။ နုပျိုငယ်ရွယ်စဉ်မှာပင် ရုပ်ရည်ယိုယွင်းအိုမင်းခြင်းကို စောစီးစွာလက်ခံနေကြရသည်ကို သတိမထားမိကြ၍လား၊ အရက်တောတွင်မျောပါနေကြရင်း မိမိအကျိုးအ တွက်သာမက တိုင်းပြည်အတွက်လည်းအကျိုးယုတ်နေသည်ကို မသိကြပြီလား၊ AIDS ကဲ့သို့ အလွန်ကြောက် စရာကောင်းသော ရောဂါဆိုးကြီးအား ခံစားနေရသူအများစုအတွက် နိုင်ငံတော်နှင့်တကွ ပုဂ္ဂလိကလူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများကတိုင်းပြည်၏လုပ်အား၊ တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကမဏ္ဍိုင်ဖြစ်သောပြည်သူလူထု၏ အင်အားမဆုံးရှုံးစေရန် ငွေကုန်ကြေးကျများစွာအသုံးပြုလျက် အစွမ်းထက်ဆေးဝါးများဖြင့် အထောက်အကူပြုပေးလျက်ရှိကြသည်။
လူသာမန်များအဖြစ်ဝင်ဆန့်ရုံမျှမက စွမ်းအားရှိသမျှလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်နေကြသည်။အရက်သေ စာသောက်စားမူးယစ်ကြသူများ၊ မြင်ရုံမျှဖြင့် အရက်ဆိုသည်ကို သိနိုင်ကြသည်။ မူးယစ်ရမ်းကားသူများပို၍ပင် မြင်မကောင်းကြ ၊ ဤသူများလူကြားသူကြား ဘယ်လိုများဝင်ဆန့်ကြပါမည်နည်။ ဤသူတို့အတွက် မည်သည့် ဆေးဝါးများတိုက်ကျွေး၍ ၎င်းတို့၏အသက်ကိုဆွဲဆန့်ထားနိုင်ကြပါမည်လဲ၊ ဆေးဝါးဖြင့်ကုသ၍ အနည်းငယ်ပြန် ကောင်းကြသူများ၊ အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေများနှင့်တွေ့၍ ပြန်သောက်ပါက မူလထက်အဆများစွာပိုဆိုးသည်။ ဘီယာကိုအရက်မဟုတ်ဟု ဝိနည်းရှောင်သောက်သုံးကြသည်။ စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်အသင်းကပြောဖူး သည်။မူးယစ်စေတတ်သောအရာမှန်သမျှ <လှော်စာ ၊ ထန်းရည် ၊ဓနိရည်၊ ဘီယာ> အားလုံးရှောင်ရမည်။သို့ သော် ရှောင်ရောရှောင်နိုင်ကြပါရဲ့လား၊ ပထမတော့နည်းနည်း၊ နည်းရာမှ များလာသည့်အခါ ကုရာနတ္ထိဆေးမ ရှိပါတော့ ၊ စိတ်ကြောင့်စွဲလမ်းမှုကိုစိတ်ဖြင့်သာကုစားရမည်၊ ဖြတ်ရမည် ၊ မအိုခင်သေကြ၊ မနာခင်သေကြ၊ AIDS ကိုကြောက်ကြသည်။ သေရည်ကိုသောက်သုံးခြင်းကြောင့် စောစီးစွာရောက်ရှိလာကြသောရောဂါဝေဒနာ များကိုဘာ့ကြောင့်မကြောက်ကြပါသလဲ၊ သေလွန်ပြီးသည်၏နောက်ဝယ်လည်း အပါယ်ငရဲသို့သက်ဆင်းရမည် ကို မကြောက်ကြပါပြီလော။
အိမ်နားမှလူငယ်လေးကတော့ မကြာခဏပြောနေသည်။ အပါယ်ငရဲသည်တကယ်မရှိပါတဲ့ ၊ သေပြီးရင် လည်း ဘာမှပြန်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်လို့ လုံးဝမကြောက်ပါကြောင်း ထပ်တလဲလဲသာပြောနေသည်။ လတ်တလော မှာပင်သားမယားတို့၏စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်၏ကဲ့ရဲ့မေးငေါ့ခြင်းကိုခံနေရသည်။လူပုံမှာလည်း အရိုးနှင့်သ ရေသာကျန်တော့သည်။ မိခင်ဖြစ်သူကမှားယွင်းစွာမွေးခဲ့မိသော “သား” ဟူသည့်သံယောဇဉ်ဖြင့် ကြောက်လန့် ရွံရှာစွာကျွေးမွေးနေရှာသေးသည်။ တရားသဘောဖြင့်ကြည့်လျှင်ဤသည်တို့သည်လောကနိဗ္ဗာန်မှဟုတ်ပါရဲ့ လား၊ စာရေးသူကတော့လောကငရဲကို အရှင်လတ်လတ်ခံစားနေရခြင်းဟုယူဆသည်။ ယခုခေတ်ဆေးလိပ်၊ အရက်၊ ဘီယာ ရောင်းချသူအလွန်များပြားလာသည်။ သုံးစွဲသူများကလည်း များလာတော့သည်ကိုး၊
ဆေးလိပ်ကြော်ငြာ၊ ဘီယာကြော်ငြာများတွင် အန္တရာယ်များကြောင်း ကြောက်စရာပုံများပြ၍ကြော်ငြာ သည်။သို့သောစာရေးသူတို့နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ကြသူများ ရာနှုန်းများစွာပင်အမှိုက်မပစ်ရဟုရေးထားလျှင်ပစ်ကြ သည်။ ကွမ်းမစားရဆိုလျှင် ကွမ်းဆိုင်များလက်မလည်အောင် ရောင်းနေရသည်။< Tobacco free school, Smoking free school> ဟုကျောင်းများတွင်ရေးထားသည်။ကျောင်းသားအချို့ခိုးဝှက်၍သောက်ကြသည်၊ ထိုမှ၊ ထိုမှတစ်ဆင့် အရက်သေစာ၊မူးယစ်ဆေးဝါး ၊ ပြောလျှင်ပိုဆိုးကုန်ကြလားဟုပင်မှတ်ရသည်။
ကျောင်းသားနှင့် ကွမ်း၊ ဆေးလိပ်၊အရက်တို့သည် လားလားမှမအပ်စပ်၊ ကြည့်မြင်၍လည်းမကောင်း၊ ကျောင်းနေအရွယ်မှစလိုက် သည့်အရက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးတို့သည် ပထမအရွယ်တွင်ပညာရှာ ဒုတိယအရွယ်တွင် အရက်၏ကျေးကျွန်ဟုပင် ပြောင်းရမလိုဖြစ်နေသည်။
စာရေးသူနေထိုင်သည့်ရပ်ကွက်တွင် အရက်ဆိုင်များပေါများလှသည်။မကြာခဏကြားရမြင်ရသည်၊ သေပြန်ပြီတစ်ယောက်၊ ဘာကြောင့်လဲ အရက်ကြောင့်သူတို့အပြစ်နှင့်သူတို့သေသည်ကအကြောင်းမဟုတ်၊ အပြစ်မရှိသည့်မိဘများနစ်နာလှသည်။ အမိနိုင်ငံတော်ကြီး၏ဆုံးရှုံးမှုမှာ ဆိုဘွယ်ရာမရှိတော့ ၊ တစ်ခဏတာရ လာသောဘဝမှာ စားဖို့နေကြသည်လား? နေဖို့စားကြသည်လား? စားဖို့နေကြသည်ဆိုလျှင်တော့ ဆန်ကုန်မြေ လေးများသာဖြစ်ပေတော့မည်၊ အနီးကပ်ဆိုးဝါးမှုဒဏ်ကိုခံစားနေရသည်က မိဘ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများဖြစ် သည်။ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဆိုလည်းအလွန်ပူလောင်လှပါသည်။
ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားကမိန့်မှာဖူးသည်။ ငါဘုရားကိုအလုပ်အကျွေးမပြုလျှင် ကုသိုလ်မရရုံသာဖြစ် မည်။ မိဘကိုအလုပ်အကျွေးမပြုစော်ကားရိုင်းစိုင်းသူသည် ယခုဘဝတွင်လည်း လူ ၊နတ် ၊ဗြဟ္မာတို့၏ ချစ်ခင်စောင့်ရှောက်မှုကိုမရရှိ ၊ သေလွန်လျှင်လည်းအလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ငရဲ၌ အကြိမ်ကြိမ် အဖန်ဖန်ခံစား ရမည်မှာ မလွဲဟုဆိုပါသည်။ လူငယ်တော်တော်များများတို့သည် ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမကိုမယုံကြည်ကြ၊ မလိုက်နာ ကြ၊ မလိုက်နာသည်ထားဦး လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းကိုပင် မပြုကြတော့သည်မှာ အလွန်ရင်နာဘွယ်ကောင်းလှပါ သည်။လိုအင်ဆန္ဒပြည့်စုံကြောင်းဖြစ်သည့် ရတနာသုံးပါးကိုယုံကြည်ကြောင်းသဒ္ဓါတရားကင်းမဲ့ကြပြီဆိုလျှင် ကိုယ်ကျင့်သီလလည်းကောင်းနိုင်ကြတော့မည်မဟုတ်ပါ။ကိုယ်ကျင့်သီလမကောင်းသောသူသည် အများတကာ ၏ယုံကြည်လေးစားမှုကင်းဝေးလျက် လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း၊ အောင်မြင်နိုင်စွမ်းများလည်း စွန့်လွှတ်ရသည်မှာမုချဖြစ် သည်။အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသူအတွက်ဒါနတရားလည်း ရှိလာနိုင်မည်မဟုတ်၊ သံသရာဝဲဂယက်ဝယ် အဖန်ဖန် ဆင်းရဲဒုက္ခများစွာကြုံတွေ့ရပြီးနောက် ဆင်ခြင်ဉာဏ်တည်းဟူသောအသိ ၊ကံ ကံ၏အကျိုးကိုသိသောပညာဟူ သည်၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိသော အရာသာဖြစ်လာချေတော့မည်။
စာရေးသူသည် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ ထိပါးစော်ကားလိုသောဆန္ဒ စိုးစဉ်းမျှမရှိပါ။ သို့သော် ဤစာစုကိုဖတ်ရှုရမိလျှင် ၊တိုင်းပြည်တစ်ခု၊နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏အင်အား လူငယ်လေးများ၏နှလုံးသားတွင်အနည်း ငယ်မျှထိရောက်စေပါကတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုတည်ဆောက်ရာတွင် အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့်အဖြစ်ပါဝင်ခွင့်ရပြီဟူ၍ သာပီတိဖြစ်မိပါမည်။အမိမြေသည်အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်သစ်ကလေးများ၏လူအင်အား၊ စိတ်အင်အားကိုအ မှန်တကယ်လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။
# လူငယ်လေးများ မူးယစ်သောက်စားခြင်းကင်းဝေးကြပါစေ။
# လိုချင်တာတွေပြည့်စုံစေဖို့ လိုအပ်ချက်တွေဖြည့်နိုင်ကြပါစေ။
# လူ့ဘဝအသက်ရှင်နေထိုင်ရခြင်းကို တန်ဖိုးထားတတ်ကြပါစေ။
Written byy ခင်လေး(အတာမြေ)
ယခင်ဆောင်းပါးမွန်တွင် သင်္ကြန်တွင်း၌ အဝေးပြေးယာဉ်လိုင်း ရှစ်ခု ပြေးဆွဲမည်